महाधिवेशनको मुड, दुई पक्षीय भिडन्तकै तयारी !::जय नेपाल न्यूज
महाधिवेशनको मुड, दुई पक्षीय भिडन्तकै तयारी !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामि फागुन ७ गतदेखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । कोरोनाका कारण कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा २०७८ सालको बैशाखदेखि ढिलोमा भदौंसम्म महाधिवेशन हुने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सुरु भएसंगै कांग्रेसमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।
विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नीति भन्दा नेताले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । पार्टीभित्र नीतिगत र वैचारिक विषयमा खास ‘बहस पनि नहुने, विवाद पनि नहुने’ परिस्थिति रहेका कारण नीतिभन्दा नेताकै विषय प्रधान हुने गरेको हो । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका बारे अनेक चर्चा सुरु भइसकेको छ । खासगरी कांग्रेसको भावी नेतृत्वमा को आउला ? भन्ने प्रश्नले कांग्रेस कार्यकर्ता मात्रै नभएर गैरकांग्रेसीको चासोपनि बढाएको छ ।
विद्यमान विधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १ सय ६७ सदस्यीय हुनेछ । जसमध्ये १ कोषाध्यक्ष र ३३ जना केन्द्रीय सदस्य चौधौ महाधिवेशबाट निर्वाचित सभापतिले मनोनित गर्नेछन् । महाधिवेशनको मैदानबाट सभापति १ , उपसभापति २ , महामन्त्री, २ , सहमहामन्त्री ८ र १ सय २१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । महाधिवेशनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार अहिलेभन्दा दोब्बर हुनेछ । कांग्रेसमा पद बढेपनि पदाधिकारीको निर्वाचन चर्चा अहिले चुलिएको छ ।
सभापति को ?
नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका लागि आधा दर्जन दावेदारहरु देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं दोस्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवार बन्दैछन् । देउवाको दाहिने हात मानिने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापति बन्ने ईच्छा व्यक्त गरेका छन् । सभापति देउवालाई निधिले ‘सभापतिमा सहयोग गर्न’ आग्रह गरिसकेका छन् । देउवा समूहबाट पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले ‘निधिभन्दा आफू सिनियर’ भन्दै सभापति लड्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । यद्यपि यसलाई ‘निधि रोक्ने देउवाको स्टेप’ का रुपमा बुझिएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासंग पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई सभापतिको स्वभाविक दावेदार बताउने गरेका छन् । देउवाईत्तर समूहमा सबैभन्दा सिनियर रहेका नेता पौडेल आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो टिमका सबै नेताहरु अटाउन सक्ने दावी गर्छन् । पौडेल समूहबाट महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह सभापतिको बलियो दावेदार हुन् । दुवैले देउवा रोक्न आफू नै उपयुक्त ‘प्रत्याशी’ भएको दावी गर्दै आएका छन् । पौडेल पक्षमा सभापतिको दावी पुग्ने नेताहरुमा अर्जुननरसिंह केसी र डा.रामशरण महतसमेत रहेका छन् । उनीहरु दुवै कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री हुन् । पौडेल पक्षकै नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेर तयारी गरिरहेका छन् ।
तेर्हौ महाधिवेशनको समीकरण अनुसार पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौंला समूहको भूमिका अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । तर सिटौंला आफै सभापतिको उम्मेदवार भए टिम छिन्नभिन्न हुने सम्भावना बढेकोले आफ्नो टिमका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई ‘सेट’ गरेर अगाडि बढ्न सिटौलालाई दवाव छ । यसअर्थमा कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापति देउवा पक्ष र ईत्तर पक्षबीच नै मूल प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । कांग्रेसका केही मञ्चहरुमा युवा नेताहरुको छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने बहस सुनिएपनि कांग्रेसवृत्त बुझ्नेहरु महाधिवेशनमा युवाहरुको समूह बन्ने सम्भावना नरहेकोमा प्रष्ट छन् ।